ဖက်ဒရယ်စနစ် – ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ဖက်ဒရယ်စနစ် – ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
ဖက်ဒရယ်စနစ် – ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
Posted by kai on Aug 24, 2011 in Politics, Issues, Think Tank |9comments
ကျနော်တို့မြန်မာပြည်မှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာကို အကြောင်းပြဖို့ကြိုးစားရင်း စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ရဲ့ ဦးနှောက် ရိုက်စားမှုကြောင့် ဖက်ဒရယ် စံနစ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ အားလုံး လိုလိုက လက်တွန့်
မန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဖေါ်ထုတ်သွားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေသာ ပြည်သူနဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် ဦးစားပေးတဲ့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ၁၉၇၄ နဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေတို့ဟာ တိုင်းပြည်အကျိူးထက် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို တရားဝင် မှုရှိအောင် ကြိုးစားခြင်းက အဓိက ပိုကျပါတယ်။
၁၉၇၄ နဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ် ပုံဥပဒေ တွေဟာ ပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ တည်ဆောက်မှု (Form and Structure) ရှိပေမဲ့ အနှစ် သာရ (Essence) အပိုင်းမှာ လစ်ဟင်းနေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာရှိပေမယ့် (အသက်) မရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
တကယ်တော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေဟာ ဟိုက ကောင်းနိုးရာရာ ဒီကကောင်းနိုးရာရာ တွေကို ဖြတ်၊ ညှပ်၊ ကပ် ကြပြီး လွပ်လပ်ရေးအချိန်မှီ ပြုစုခဲ့ကြရရှာတာပါ။ သို့သော် အသေအချာ ပြန်စဉ်းစားရင် ဖေါ်ထုတ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေတွေအထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ငြင်းချက် ထုတ်လို့ ရတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန် အပြင် (အနှစ်) ပါတာကြောင့်ပါ။
ဥပဒေပြုစုရေး ကော်မီတီတွေ ဆပ်ကော်မီတီတွေရှိပေမယ့် တကယ့်အနှစ်ကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့အတူ သခင်မြ ၊ သခင်နု ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့လို ဖဆပလ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ကပဲ ဦးဆောင်သွားကြတာပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ အလုပ်ကြခံရတော့ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဦးနုနဲ့ အတူ အင်္ဂလန် ဆွေးနွေးပွဲကအပြန် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စေခိုင်းချက် အရ ယူဂိုစလပ် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံကို သွားလေ့လာ နေရတာကြောင့် ဥရောပ ရောက်နေ တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာ ဘုရင်စံနစ်ကို ပြန်ဖေါ်ထုတ်ရင် တည်ငြိမ်မှု ရမလားဆိုပြီးလည်း မင်းလောင်း ပြန်ရှာဖို့တောင် စိတ်ကူးခဲ့ကြသေးတယ်။ အဘက်ဘက်ကို လေ့လာပြီးမှ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို ရွေးခဲ့ကြတာပါ။
အုပ်ချုပ်ရေးကို စဉ်းစားတဲ့အခါအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ သမ္မတနဲ့ ဖက်ဒရယ်စံနစ်ကို ရွေးမလား၊ အများ အုပ်ချုပ်မှု (majority rule) လို့ခေါ်တဲ့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ရွေးမလားဆိုတဲ့ ပဓာနကျ တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို (နိုင်ငံရေးသမား) တွေက ဆုံးဖြတ်ကြပြီး ဥပဒေဘောင်ဝင်အောင် ဥပဒေသမား ဦးချန်ထွန်းကို တာဝန်ပေးခဲ့ကြတာပဲ။ ဒီနေရာမှာ နေရူးရဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင်က ဦးချန်ထွန်းကို အများကြီး အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ အချောပြင်ပြီးသားကို သခင်မြက ဘာသာပြန် ပေးခဲ့ရတယ်။
အရေးကြီးတဲ့အချက်က နိုင်ငံရေးသမားတွေကပဲ အဓိကကျတဲ့ ဘယ်စံနစ်ကို ရွေးချယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချသင့်တယ်လို့ စာရေးသူ ကခံယူမိတယ်။ အကြောင်းက နိုင်ငံရေးသမားစစ်ရင် လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှုဟာ နိုင်ငံရေးရဲ့ (အနှစ်သာရ) ဆိုတာ သိတာကြောင့် နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဦးစား ပေး စဉ်းစားတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အက်လက် ဆန်ဒါးဟယ်မတင်တို့လို အမေရိကန် ခေါင်းဆောင် တွေကိုပဲကြည့်ကြည့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီး စဉ်းစားကြတယ်။ ရေရှည် အကျိုးအတွက် နက်နက်တွေးကြတယ်။ တိန်လျောက်ပိန်လို ကွန်မြူနစ်တောင် နိုင်ငံရေးသမား စစ်တာကြောင့် တိုင်းပြည်အကျိုးကို အဓိက ထားခဲ့တာပဲ။
နောက် အရေးကြီးတဲ့အချက်က မြန်မာတွေရဲ့အမြင် တခုတည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်သားတွေရဲ့ အမြင် လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ အမေရိကားမှာတုန်းက လူမျိုးကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်နယ်တွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ပြည်နယ်ကြီး / ပြည်နယ်ငယ် အရေးကိစ္စပေါ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အပေးအယူ လုပ်ကြရာမှာ ညီမျှအောင်ပြည်နယ်အကြီးလည်း Senator (၂) ယောက်၊ ပြည်နယ်ငယ် လည်း Senator (၂) ယောက် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် အရေးကြီးတဲ့ ရာထူးခန့်ရာမှာ သမ္မတရဲ့ အဆိုပြုမှုကို Senateက သဘောတူမှ တရားဝင်တယ်။
အထူးသဖြင့် အမြင့်ဆုံး တရားရုံးချုပ် (Supreme Court) တရားသူကြီးတွေကို ရွေးချယ်ရာမှာ Senate ရဲ့ သဘောတူညီမှုဟာ အလွန်အရေးပါတယ်။ တခါ သမ္မတကို ရာထူးကဖယ်ရှားဖို့ အစီအစဉ်မှာ အောက်လွှတ်တော်က တရားလိုအဖြစ် စွဲချက်တင်ရပြီး Senateက ဂျူရီလူကြီးအဖြစ် အဆုံး အဖြတ်ပေးရတာ။ Senate ကို ဦးစားပေးတဲ့ စီမံချက်တွေကို ထည့်သွင်းထားပြီး ပြည်နယ်ကြီး၊ ပြည်နယ်ငယ် ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းခဲ့ကြရတာ။ အောက်လွှတ်တော်က (လူဦးရေ) ကို ကိုယ်စားပြုတာ။ အထက်လွှတ်တော် Senate က (ပြည်နယ်) ကို ကိုယ်စားပြုတာ။
နောက်တချက်က ဥပဒေလုပ်တာနဲ့ အုပ်ချုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း (skill sets) ချင်း မတူကြဘူး။ ဥပဒေ ပြုသူက အပေးအယူ ( Art of Compromise) ကျွမ်းရမယ်။ ဝန်ကြီးလုပ် အုပ်ချုပ်သူက အမိန့်ပေး ခိုင်းတတ်ရမယ်။ပေါ်လစီကို နားလည်ရမယ်။ နောက်တချက်က စာရေးသူ အမြင်မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အများအားဖြင့် (အုပ်ချုပ်ရေး) မှာ (အားနည်း) တယ်။ (အသေးစိပ်) ကို မနိုင်ကြ။ စ်ိတ်မဝင်စားကြ။ အုပ်ချုပ်ရေးတော်တဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် (ရှား) တယ်။
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ပုံစံတွေကိုကြည့်ရင် ဝန်ကြီးတွေဟာ မိမိ ဘာသာရပ်နဲ့အတူ ဆိုင်ရာပေါ်လစီ တွေကို ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင် (technocrat) တွေများတယ်။ တခါတရံ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါပေမယ့် လူနည်းစုပဲ။ ဒါကြောင့် ပေါ်လစီ ချရာမှာရော၊ ဖေါ်ဆောင်ရာမှာပါ နိုင်ငံရေးသမား ဝန်ကြီးတွေထက် ထိရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ နောက်တချက်က ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ အုပ်ချုပ်မှု သက်တမ်း ကန့်သတ်ချက် မရှိဘူး။
ဥပမာ ဂျပန်မှာ အဲလ်ဒီပီ (လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်) တွေဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးကတည်းက အုပ်ချုပ် လိုက်ကြတာ အုပ်စုအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပဲရှိပြီး ပဒေသရာဒ်ခေတ်က ရွာစား နယ်စားတွေလို နယ်ပယ် အပိုင်စားတွေ ဖြစ်လာ ကြတာကြောင့် နောက်ဆုံး ဗြူရိုကရက်တွေကပဲ အာဏာ ကြီးထွား လာကြတဲ့ ဘဝကိုရောက်ရတယ်။ အုပ်စုချင်းပြိုင် အစိုးရခဏခဏပြောင်း၊ ခိုင်မြဲတာကဗြူရိုကရက်တွေ
အီတလီကတော့ အစိုးရ ခဏခဏပြောင်းသလို ပါတီတွေလည်း ပြောင်းဆိုတော့ ဘာမှ အလုပ် မဖြစ်မြောက်တော့ဘူး။ ကြီးထွားလာတာက မာဖီယားပဲ။ အယုံ အကြည်မရှိ အဆိုကို သုံးပြီး မဲခွဲပြီး အစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်တာကြောင့် အစိုးရ မတည်ငြိမ်မှု ရှိနိုင်သလို သက်တမ်းကန့်သတ်ချက် မရှိတာကြောင့် ဂျပန်လို တပါတီ အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရသက်တမ်း ကန့် သတ်ချက် ဟာ ရှိသင့်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။
အရင်းစစ်လိုက်ရင် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ (လူဦးရေ) အပေါ် မူတည်တာပဲ။ ဒါဆို ဗမာ တွေက လူဦးရေ များတာကြောင့် အမြဲအသာစီး ရနေတော့မှာပေါ့။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ အောက်လွှတ်တော်က အဓိက မကျဘူးလား။ သူ့မှာ နိုင်မှအစိုးရ ဖွဲ့ရ မှာလေ။ ဒါဆို တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် တရားပါ့မလား။ လူမျိုးစုလွှတ်တော် ဆိုတာရှိပေမယ့် အောက်လွှတ်တော်လောက် မထိရောက်။ ဒါကြောင့် ၁၉၄၇ ခု ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဌာနတွေတည်ထောင် ထားရတာ။ ဒါ့အပြင် သမ္မတရာထူးကို တိုင်းရင်း သား တွေကို ကိုယ်စားပြုရအောင် အလှည့်ကျ ရွေးချယ်စေတာ။
ပြောမဲ့သာပြောတာ (ဦးနုတို့ခေတ်)က လုပ်မှားကိုင်မှားတွေကြားကတိုင်းရင်းသား တွေ ဟာ (စစ်တပ်ခေတ်)နဲ့ စာရင် အများကြီး နေရာရကြပါတယ်။ ဖဆပလထဲမှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေ နေရာရကြသလို အမတ်ဆိုတာက လည်း တကယ် (မဲ) ပေးနိုင်တဲ့ အမတ်မင်းမို့ အတိုင်းအတာ တခုအထိတော့ သြဇာရှိတာပါပဲ။ ဦးနု သက်တမ်း တလျောက် (နောက်ပိုင်း) စဝ်ခွန်ချိုဟာဒုဝန်ကြီးချုပ် (နိုင်ငံခြားရေး) ဌာနကို ကိုင်လာတာ မဟုတ်ဘူလား။ကျေနပ်စရာ အဆင့် ရှိပြီလား။ မရှိသေးဘူး။ သို့သော် နောက်ပိုင်း ခေတ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အများကြီးသာပါတယ်။
စကားစပ်မိလို့ ပြောရရင် တိုင်းရင်းသား ပညာတတ်တွေ အထဲမှာ စာရေးသူ အလေးစားဆုံးဟာ သမ္မတကြီး စဝ်ရွှေသိုက်ရဲ့သား ဒေါက်တာ ယူဂျင်းသိုက်ပဲ။ ဦးယူဂျင်းဟာ သေနတ်လည်း ကိုင်တိုက်ဖူးတယ်၊ ပါတီလည်းထောင်ဖူးတယ်၊ ပါရဂူဘွဲ့ရ ပညာတတ်အပြင်၊ နက်နက်တွေးပြီး အရှည်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ လူတော် တယောက်ပဲ။
ကျနော် အလေးစားဆုံးက လူကြီးလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေအချင်း တခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို tempe-rament လို့ခေါ်တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ထားရှိတယ်။ ဒေါက်တာ စတိုင်းဖတ် ဦးစီးကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေက စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဝေဖန်ငြင်းဆိုလာတော့လည်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ပြန်လည်ရှင်းပြ ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒါ အီးအိုင်ကရူ (EIQ) မြင့်တာကိုပြတာပဲ။ အသိစွမ်အား မြင့်တယ်၊ ချင့်ချိန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်၊ မျှတတဲ့စိတ်ဓါတ် ရှိတယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပြဿနာလို သိမ်မွေ့ ခက်ခဲရုံမက စိတ်ခံစားမှု (emotion) ပါ ပါဝင်ရှုပ်ပါထွေးလာတတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ် အဖြေရှာတဲ့အခါ အလွန်အကျိုးရှိ ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဦးယူဂျင်းလို လူတော်ခေါင်းဆောင်တွေ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ လိုအပ်လှပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ် လူငယ် တိုင်းရင်သားတွေအထဲမှာ ဒီလိုအဆင့်မြင့် လူငယ်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အော့ဖေါ့က် (Oxford) မှာ သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး အဲလ်အဲလ်အမ် (LLM) ရပြီး အခု အဲလ်အဲလ်ဒီ (LLD) ဆက်တက်နေတဲ့နော်မေဦး တို့လို ကရင် လူငယ်လူတော်တွေရှိပါတယ်။ ENC မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ Dr Lian H. Sakhong ဟာလည်း ပညာတတ် လူတော်တယောက်ပါပဲ။ ဗမာတွေ အထဲမှာတော့ နယ်စပ် အခြေစိုက် ဗမာ့ရှေ့နေကောင်စီ (BLC) က လူတွေပဲ ဖက်ဒရယ် စံနစ်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ကြတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် မတူညီတဲ့ စံနစ်တွေကို အသေအချာ လေ့လာပြီးမှ မြန်မာပြည် အတွက် ကောင်းမယ့် (အနှစ်) တွေကို ယူကြပြီး (ပုံ) ဖေါ်ပြီးမှ ကဲ ဦးချန်ထွန်း ဥပဒေ ဘောင် ဝင်အောင် ဥပဒေ စကားနဲ့ သွားရေးဆိုပြီး စေခိုင်းတာပဲ။ အခြခံဥပဒေ ရေးဆွဲကာနီးမှ ဟို စာအုပ် ပေးပါဦး ဒီဟာဖတ်ကြပါဦးဆိုပြီး ကမူးရှုးထိုး ရေးခဲ့ကြတာလည်း မဟုတ်။ ကျောင်းသားဘဝ နိုင်ငံရေးသမားပေါက်စ ဘဝကတည်းက (အသိစွမ်းအား) (capacity) မြင့်အောင် လေ့လာခဲ့ကြရတာ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆီက အတုယူစေချင်တာက နိုင်ငံရေးမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်အချိန်ဘယ်လို ပေါ်လာမယ် မပြောနိုင်ဘူး။ လိုအပ်ချက်ကိုသိပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ထားဖို့က ကိုယ့်အလုပ်ပဲ။ အထူး သဖြင့် မြန်မာလူငယ် လူရွယ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအကြောင်းနဲ့ ဖက်ဒရယ်စံနစ် အကြောင်းကို လေ့လာ ပြီး မိမိတို့ရဲ့ အသိစွမ်းအား (capacity) ကို အားဖြည့်ထားစေချင်တာ စာရေးသူရဲ့ စေတနာ ပါ။ (အသိ) မြင့်မှ (တရားမျှတမှု) ကို နားလည်နိုင်သလို (အရှည်)ကို ကြည့်နိုင်ပါမယ်။
နောက်တခါ ပြည်နယ်အချင်းချင်း အငြင်းပွားရင် ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (Mechanism) တွေရှိရမယ်။ နောက်မို့ဆိုရင် အငြင်းပွားနေကြတာနဲ့ ဘာအလုပ်မှလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ချင် တဲ့စိတ်က စောနေတာကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးဖြောင့်ဖြောင့် လုပ်နိုင်အောင် (Governance) အတွက် ဖက်ဒရယ်စံနစ် အစား ယူနီတာလီ (Unitary) စံနစ်ကို ရွေးခဲ့ကြရတယ်လို့ စာရေးသူ နားလည်ထားပါတယ်။
နောက်တချက် က ဖွံ့ဖြိုးမှု မညီမျှတာတွေရှိတယ်။ အောင်ဆန်း၊အက်တလီစာချုပ် အပိုဒ် ဂ၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ)အရ ပင်လုံစာချုပ်၊ ချုပ်ဆိုအပြီးမှာ ရီး(စ်)ဝီလျံ ဦးဆောင်တဲ့ တောင်တန်းဒေသ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ရဲ့ အစီအရင်ခံစာမှာ တချို့တောင်တန်းနေ ဒေသခံတွေဟာ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ် တဲ့ နည်း နဲ့ အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးတဲ့ အတွက်နဲ့ အချိန်အမရတော့တာမို့ ဒေသအလိုက် သင့်လျော်သော နည်းကိုသာသုံး ရွေးချယ်ရန်သာ ထောက်ခံခဲ့ ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ် စကားလုံးကို အဓိပ္ပပါယ် မပေါက်ဘဲ၊ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးကြရာမှာ အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ (အသိ) တိုးတက်မှု မညီမျှမှုကို စောင့်ပြီးခေါ်ဆောင်ဖို့ အချိန် မရတာလည်း ပါနိုင်တယ်လို့ စာရေးသူ အမြင် ရှိပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ သမိုင်း ပါမောက္ခ ဦးထွန်း အောင်ချိန် ထုတ်ဝေသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ (ပထမတွဲ) စာမျက်နှာ ၃၃၆ ကိုညွန်းပါသည်။)
အမေရိကားမှာတောင် ဖက်ဒရယ်နဲ့ ပြည်နယ်ပြဿနာဟာ ဒီနေ့အထိ ရှင်သန်လျက်ပဲ။ အိုဘားမားကဲ (Obamacare) လို့ အမည်တပ်ကြတဲ့ ကျန်းမာရေး ဥပဒေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေအရ တာရား မဝင်ဘူးဆိုပြီး ပြည်နယ် (၂၆) ခုက တရားစွဲထားကြတယ်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရက ဗိုလ်မကျ နိုင် အောင်ပါ။
လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဟာ ပုံသဏ္ဍာန် (Form) ရှိပေမဲ့ (အနှစ်) (Essence) မှာ အားနည်းနေသေးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူ အမြင်အရ လက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်ကို (Institutionalized) ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလို တချိန်တည်းမှာ (အနှစ်) ကို အားရှိအောင် (အားဖြည့်) နိုင်ရပါမယ်။
ကမ္ဘာမှာ လူတွေတကြော်ကြော် အော်နေကြတဲ့ အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ (Constitution) က (လွပ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်) ဆိုတဲ့ Freedom of Speech ကို အာမခံပေးတဲ့ First Amendment ပထမတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်ချက်မှာ ယနေ့ အမေရိကန်တိုင်းပြည်ကို ဂျောက်ထဲထိုးချနေတဲ့ အခွင့်အရေး တခုဟာလည်း ကပ်ပါလာတယ်။ လူတွေ သိပ်သတိမထားမိကြဘူး။ ဒီ အခွင့်အရေးကို ပြင်ဖို့က ခပ်ခက်ခက်။ သူတို့ဆီမှာတောင်ပြဿနာရှိတာ ဒီမှာလည်း ပြဿနာတွေ ဘယ်ကင်းပါ့မလဲ။ ဒီကိစ္စတွေဟာ အလွန်သိမ်မွေ့ ခက်ခဲတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါလား။
ယနေ့ အစိုးရသစ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအကြား ဘော်ဒါစစ်တပ် ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဋိပက္ခ တိုက်ပွဲပြဿနာကို အဓမ္မလက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား ပုံသဏ္ဍာန် အသွင်ကို ပြောင်းလဲပြီး (အနှစ်) ရံလိုက်လျှင် အဖြေရ နိုင်စရာရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အမြင်အတွေးများကို နောက်အပိုင်းတွေမှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါ့မယ်။
သဘာဝအားဖြင့် လူတွေဟာ ပျက်စီးနိုင်တယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့် (အာဏာ) နဲ့တွေ့ထိတဲ့အခါ မခံနိုင်ဘဲ ပျက်စီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် (လူ)ကို စံနစ်၊ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းရပါတယ်။ နောက် လူတိုင်းရသင့်၊ ခံစားခွင့်တွေကို အားလုံးသိအောင် တဖန် ဥပဒေနဲ့တခါ စာနဲ့ ပေနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ပြီး အတိအလင်းကြေညာထားရပါတယ်။ ဒီကမှတဆင့် ဥပဒေစိုးမိုးသော Rule of Law စံနစ်ကို ဖေါ်ထုတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပဒေ ပြုစုသူတွေကိုလည်း ဘာတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဘာတော့လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒီဥပဒေတွေကို သုံးပြီး မင်းလုပ် အုပ်ချုပ်သူတွေကိုလည်း ကန့်သတ် ပေးထားရပါမယ်။
တခါ၊ ဒီ (၂) ဦးကြား အငြင်းပွားခဲ့ရင် လွပ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ တရားသူကြီးတွေက အဆုံးအဖြတ် ပေးရပါမယ်။ တရားသူကြီးတွေကလည်း မိမိတို့ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ဥပဒေမလုပ်ရပါ။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ် မှာတော့ (ဥပဒေ) ဆိုတာက အုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာရှိတာကိုး။ သူကပဲ ပြန်အုပ်ချုပ် တော့ အားလုံးသူ့ကို မော်မကြည့်ရဲကြတော့ ဘူးပေါ့။
တရားသူကြီးဆိုတာတွေကလည်း ဆွဲခန့်တွေ မဟုတ်လာား။ ဒါကြောင့် နဝတ – နအဖ ခေတ် တလျှောက် Rule byLaw စံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ ကြတာမဟုတ်လား။ ဒါ ဥပဒေ ကွ ဆိုရင် ဘယ်သူမှ အငြင်းနိုင်တော့။ ဥပဒေကလည်း စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ။
လောလောဆယ် စံနစ်သစ်က စစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက်တော့ တဆင့်မြင့်လာပြီပေါ့။ အင်စတီကျူးရှင်း (Institution) အဆောက်အအုံလို့ ပြောနိုင်တဲ့ အထက်လွှတ်တော်၊ အောက်လွှတ်တော်၊ တရားရေး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အစိုးရတွေ ပေါ်လာပေမယ့် ပုံသဏ္ဍာန်သာ ပေါ်လာတယ် (အနှစ်) မပါ သေး တာ ကြောင့် (အသက်) မပါသလို ဖြစ်နေသေး တယ်။ မြောက်ကိုရီးယားမှာ လမ်းအကျယ်ကြီးတွေ လူမြင်ကောင်းအောင် ဆောက်ထားပေမယ့် လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေမရှိဘဲ စက်ဘီးနဲ့ လမ်းလျှောက် နေတဲ့လူတွေ ဟိုကြဲကြဲ ဒီကြဲကြဲသာရှိတဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကို ပြေးမြင်မိတယ်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စံနစ်ဟာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အတူ(အနှစ်) ပိုင်းမှာ ချို့တဲ့မှု ရှိပင်ရှိငြား သော်လည်း ဦးနေဝင်း ရိုက်ချိုးဖျက်စီးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံ (Political Institution) တွေ ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ တိုင်းသူပြည်သား အများစုဟာ စာရေးသူ အမြင်အရ အင်စတီကျူးရှင်း (Institution) နဲ့ ပတ်သက်လာ ရင် အသိမကြွယ် အမြင်မကျယ် ကြသေးဘူးလို့ ခံစားရမိတယ်။
အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့ရဲ့အရေးပါမှုကို (မသိ) ကြပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေ၊ ဂျပန်တို့၊ တိုးတက်တာ ဒီအင်စတီကျူးရှင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ အင်စတီကျူးရှင်း အတွင်းမှာ နေရာ (position) တွေရှိပါတယ်။ ဒီနေရာ ဒီရာထူးကို ရောက်တဲ့သူဟာ ဒါမလုပ်ရဘူး။ ဒါကိုတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ် စသည်ဖြင့် လုပ်ထုံး စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို အတိအကျ ချမှတ်ထားပြီး (လူ) တွေကို ဘောင်ခတ် ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် (စံနစ်) နဲ့ (စည်းကမ်း) ရှိကြပြီး၊ တိုးတက်မှု ရှိလာကြတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကတော့ (အချိန်)ကို လေးစားရမယ်မှန်းတောင် (မသိ) ကြသေးဘူး။ ဒါကြောင့် (မြန်မာစံတော်ချိန်) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းပေါ်လာရတာပေါ့။
ဒီဆောင်းပါးက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စံနစ်ကိုရွေးရာမှာ ဖက်ဒရယ်စံနစ်အတွင်း သတိရှိရမယ့် အချက်များ၊ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်များကို နောင်တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ကြရမယ့် လူငယ်၊လူလတ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာမယ့်လူများ သိသာသတိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးကို အတိုက်ခံမျက်စိနှင့် ရေးသည်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာ မွေး၊ မြန်မာပြည်မှာ လူလား မြောက်ခဲ့ရသည့် မြန်မာပြည်သား စစ်စစ်မျက်စိနှင့်ရေးခြင်းနှင့် စာရေးသူ၏ အမြင်သက်သက် ဆိုသည်ကို သိစေလိုပါသည်။ (မျှတ) မှုရှိမှ ၊ ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီး အဖြေရှာနိုင်မှ (ငြိမ်းချမ်းမှု) ရှိနိုင်ပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှ တိုင်းပြည် ထူထောင်နိုင် ပါမယ်။
ဒီလို (အသိ) ရှိဖို့က (အသိစွမ်းအား) လိုပါတယ်။ အသိစွမ်းအားဆိုတာ ခုရေတွင်းတူး အခုရေရသလို မဟုတ်ပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြည့်စည်း ယူရတာပါ။ တိုင်းပြည် တပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုတာ သိမ်မွေ့ နက်နဲခက်ခဲလှပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အဖြေရှာ ကြရမည့် အနာဂတ် လူငယ်များ အသိစွမ်းအား မြင့်မား ဥာဏ်အမြှော်အမြင် ကြီးကြပါစေဟု ဆုတောင်းရင်း။
အပိုင်း (၃) ကိုဆက်ဖေါ်ပြလိုက်ပါမည်။
ပြည်သူများအားလုံးကလည်း တရားမျှတမှုရှိတဲ့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး တိုင်းပြည်ရေရှည်တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုတွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့
အခြေခံဥပဒေကောင်းကသာ လက်ရှိရော၊ နောင်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်ရော
တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်…။
လက်နက်ကိုင်အုပ်စုက (တပ်မတော်ကိုအသုံးချကာ) ကျန်ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာ နေရာယူထားပြီး တိုင်းပြည်ကို နိုင်ငံရေးအရကျွန်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အတင်းအဓမကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူများ အနှေးနဲ့အမြန် အကျိုးနည်း ဒုက်ခရောက်စေပါလိမ့်မယ်..။
အမြင်ကျယ်တဲ့၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့၊ ပညာဥာဏ်ကြီးတဲ့၊ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့၊ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ သူတွေ ပေါင်းစုပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အခြေခံဥပဒေကောင်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ မျှော်လင့်လျှက်…။
“””ဒီလို (အသိ) ရှိဖို့က (အသိစွမ်းအား) လိုပါတယ်။ အသိစွမ်းအားဆိုတာ ခုရေတွင်းတူး အခုရေရသလို မဟုတ်ပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြည့်စည်း ယူရတာပါ။ တိုင်းပြည် တပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုတာ သိမ်မွေ့ နက်နဲခက်ခဲလှပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အဖြေရှာ ကြရမည့် အနာဂတ် လူငယ်များ အသိစွမ်းအား မြင့်မား ဥာဏ်အမြှော်အမြင် ကြီးကြပါစေဟု ဆုတောင်းရင်း။”””
ခုလို ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းတို့ကထောက်ပြဝေဖန်ပေးတာကို လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲရောက်နေပီး မလူးသာတဲ့ ခုလိုအနေမှာ သူတို့ နဲ့ ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပြီး. ပျော့ပျောင်းညင်သာစွာဆွဲခေါ်မယ့် အမေစု ရဲ့ မူဝါဒ ကပိုကောင်းမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။တတ်လွန်း၍တော့မဟုတ်ပါ။မိမိ ထင်မြင်ချက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ.. အနောက်နိုင်ငံတွေကြားမှာ အနှစ် ၄၀လောက် ပညာသင်ကျင်လည်ခဲ့ပြီး.လက်ရှိ.မြန်မာပြည်မှာလည်း.. အနှစ် ၂၀ကျော်ကြာ တောက်လျှောက်မြန်မာံနိုင်ငံရေးကို မျက်ခြေမပြတ်.. စောင့်ကြည့်ပါဝင်နေသူဖြစ်နေပါတယ်.။
နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်လည်း လွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်အတွက်… အင်မတန်ပြည့်စုံနေတဲ့. ဘုရားပေးတဲ့…ခေါင်းဆောင်တယောက်လို့ မြင်တာပါပဲ..။
သာမန်အားဖြင့်တော့.. သူဘာလုပ်လုပ် ..ထောက်ခံပေးလိုက်တာ မမှားဘူးလို့ထင်မိတယ်..။
“ဒေါ်စုကို ၀ိုင်းရံကြ ” လို့… ပါပဲ..။
ဒေါ်စုကို ၀ိုင်းရံပြီး.. လိုအပ်တာတွေညှိနှိုင်းပြင်ဆင်သွားရင်.. မြန်မာပြည်ကြိး အချိန်တိုနဲ့..ကောင်းလာမယ် ထင်နေမိတာပါပဲ..။
အခြေခံဥပဒေဆိုတာကလည်း.. လူကလုပ်တာပဲ…(အချိန်ကာလနဲ့မကိုက်ညီတဲ့)… မသင့်တော်တာတွေပါနိုင်တာပေါ့…။
…. အမင်းန်မန့်တွေနဲ့..ဖြည့်စွက် ပြင်ရတာပဲလေ..။
ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ရမယ့် Amendment နဲ့ တူတယ်..။
ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကလည်း ပြည်သူတွေလက်ထဲမှာ မရှိပါဘူး…။
ကျားသနားမှာ နွားချမ်းသာမယ့်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ကို လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့
လက်ထဲမှာ ၀ကွက်ရမယ့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့တော့
Correction Pen လောက်နဲ့ မလုံလောက် UPG သုတ်ဆေးပုံးလိုမယ်နဲ့တူတယ်…။
I want to read ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း articles.
Any body knows, ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း blog or website address ???
ပြောလို့သာပြောနေရတာ ဒီလောကထည်းမှာက အသက်အရွယ်အရ
အတတ်ပညာအရ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားနဲ့ ပါရဂူလို ခြားနားတယ်
ယဉ်ကျေးမှု့အရ ကျောက်ခေတ်လူသားနဲ့ ဓမ္မကထိကလို ခြားနားတယ်
ဝင်ငွေပမာဏတွေအရ ရေတံခွန်နဲ့ ကလေးသေးပန်းသလို ခြားနားတယ်
အလုပ်အကိုင်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ နွားကျောင်းသားလို ခြားနားတယ်
ပြောရရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ မတန်ရာတွေကို ပြောတယ်လို့လည်း ခံစားမိပါတယ်
နောက်ပြီး ကိုယ်လို ခုနစ်တန်းတောင် မအောင်တဲ့ နွားကျောင်းသား နဲ့မတိမ်းမယိမ်း
တောသားတစ်ကောင်က ဒီလို ဂုရုဆရာကြီးတွေကို စာမတတ်ပေမတတ် ကိုယ့်စိတ်ထည်း
ခံယူနားလည်သလောက်ကို အရဲစွန့်ပြီး ပြောဆိုရတာကို စိတ်မသက်မသာလည်းရှိလှပါတယ်
နောင်များလည်း မပြောဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမယ်
ပြောဖြစ်ဘို့ဆိုတာက နောင်အခါ ဒီလို အကြောင်းအရာတွေကို မဖတ်ဖြစ်အောင်အလျှင်လုပ်ရမယ်
တော်ယုံလူဆို ဖတ်မှာတောင်မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ် ( အထင်ပါ )
ဖတ်သည့်တိုင်အောင်တောင် အခြားဆက်စပ် အကြောင်းတွေကို မဖတ်မိဘူးသူတွေအနေနဲ့
နားလည်နိုင်မယ်တောင်မထင်ပါဘူး ( ဒါလည်းအထင်ပါ )
နားလည်တာခြင်းတူရင်တောင် သဘောပေါက်ပုံခြင်းလည်း တူမည်မထင် ( အထင် )
( ယနေ့ အစိုးရသစ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအကြား ဘော်ဒါစစ်တပ် ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဋိပက္ခ တိုက်ပွဲပြဿနာကို အဓမ္မလက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား ပုံသဏ္ဍာန် အသွင်ကို ပြောင်းလဲပြီး (အနှစ်) ရံလိုက်လျှင် အဖြေရ နိုင်စရာရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အမြင်အတွေးများကို နောက်အပိုင်းတွေမှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါ့မယ်။)
ပြည်မက ဗမာ လူမျိုးတွေအများစုဟာ သေခြာနားမလည်ပါဘူးလို့ပြောရင် လက်ခံကြမလားမသိပါဘူး
သေခြာနားလည်တဲ့သူဟာ အတော်ရှားပါးတယ်လို့ပြောရင်လည်း ကျေနပ်ကြပါဦးမလားမသိ
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လူမျိုးရေး နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်လိုမှု့ရယ် ( လူမျိုးရေးခွဲခြားမြင်မှု့ )
မြန်မာပြည်မက လူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လိုအပ်မှု့ ( လူမျိုးရေး လစ်လျှူလျှူ့မှု့ )
ဒီအကြောင်းအရာ နှစ်ခုကိုသာ သေးခြာယှဉ်တွဲပြီး ရေးပြမယ်ဆိုရင်
ဟေ့ယောင်ဘောင်ဘု မူးနေရင် အေးအေးနေကွာ၊ နားမျက်စိနှောက်တယ်။ ဒီလိုပါ ဆရာကြီး သူထင်တာနဲ့ ကျနော်ထင်တာ မတူပါဘူး၊ တခြားစီပါ။ အလွယ်ပြောရရင် သူထင်သလို မဟုတ်ဘဲ အခြားတမျိုးထင်ပါတယ်။ ထင်တာခြင်းတူပေမဲ့ အထင်အတူတူပဲလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့၊ ထင်မိတာ ဒီလိုပါ။ တခုတော့ရှိတယ် သူမူးမူးနဲ့ပြောသလို စာကအရမ်းရှည်တော့ လုံးစေ့ပေါက်စေ့တော့ မဖတ်နိုင်တော့ဘူး၊ စာထိုင်ဖတ်နေလို့ ဗိုက်ဝမှာမဟုတ်ဘူးလေ? ဆရာကြီးက လာကျွေးမှာမှမဟုတ်တာ
ဆရာဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းပြောချင်တာ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို အခြေပြုတဲ့စနစ် မထူထောင်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိတ်သမိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုအခြေခံခဲ့ပြီး သူရုတ်တရက်ကျဆုံးသွားတဲ့အခါ ဦးစီးပဲ့ပြင်မဲ့သူမရှိတော့ပဲ မူလလမ်းပေါ်ကနေ သွေဖီသွားခဲ့တာကို သင်ခန်းစာယူဖို့ ဆိုလိုဟန်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗဟိုပြု နိုင်ငံရေးစနစ်တခု ချမှတ်ကြမယ်ဆိုရင် သမိုင်းဘီးတပတ်ပြန်လည်မှာကို မြင်ကြဖို့လို့ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောမလဲ အခုအချိန်အထိတော့ ဒေါ်စုကိုပဲ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအတွက် ပုံအပ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကလည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုညှိနှိုင်းဖို့ အခက်အခဲတစုံတရာ ရှိပုံရနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ထောက်လှမ်းရေးတွေ အစွမ်းထက်ပုံကိုလည်း သိရဲ့သားနဲ့။ ဆရာပြောသလို တဦးတယောက်ထဲကို အားပြုတာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း လက်ခံပါတယ်။ ဆရာ့အနေနဲ့က ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုထောက်ခံသူ၊ လက်ရှိလွှတ်တော်ကနေ သွားယူလိုသူဆိုတော့ တရားဝင်နေတဲ့ လက်တဆုပ်စာ လွှတ်တော်ထဲက ၁၅မိနစ် သုံးသိန်းစား အတိုက်အခံအမတ်ဆိုသူတွေရဲ့ နေရာပျောက်သွားပြီး အန်အယ်ဒီနဲ့ဒေါ်စုတို့ သူ့ခြေသူ့လက် မြန်မာ့အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးကို ပုံဖော်သွားမှာ လိုလားပုံမရလို့လည်း ခံစားမိပါတယ် (ကျနော့်အမြင်သက်သက်ပါ)။ အခုအချိန်အထိမှာတော့ စစ်တပ်ထောက်ခံသူဗိုလ်ချုပ်တစု၊ ဒေါ်စုနဲ့ တိုင်းရင်းသားသူပုန်တွေကသာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားကြလိမ့်မယ်လို့ မြင်နေရပါကြောင်း…။
လက်ရှိ (၂၀၀၈)ဖွဲ့စည်းပုံ က ၁၉၆၂ နောက်ပိုး ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ အမြင်ချင်းတူအောင်အတတ်နိုင်ဆုံဆွဲထားပါတယ်။ မှတ်မိသေးမယ်ဆိုရင် ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်ထက်က လူထု သန်း(၆၀) ကိုနိုင်ချင်တိုင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ လက်တဆုပ်စာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကိုမစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ ကို ဖက်ဒရယ်ပုံပေါက်အောင် တမင်ပုံသွင်းပြီးနည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ပါ – ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဆိုပြီး။ တကယ်တော့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို တပြညးသားမှ လျှော့ထားတာဒီနေ့အထိ မတွေ့ရကြောင်းပါ။
ဆရာကြီးများစုံအောင်စောင့်ရင်းနဲ့ ဆက်မစောင့်နိုင်တော့လို့ ကျွန်တော် မလိမ်မိုးမလိမ္မာလေး ၀င်ဆွေးနွေးပါရစေ။
ရွာထဲကနားလည်တဲ့တဦးဦးက ဖက်ဒရယ်မူ ဆိုတာကို ဖက်ဒရယ်စံနစ်ဆိုတာကို စုံစုံစေ့စေ့လေး ပိုစ့်တင်ဆွေးနွေးပြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ အဲဒါအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါက နောင်သုံးလှည့်မြောက် လောက်မှာ ရွှေ့မယ့် အကွက်ရဲ့ ခေါင်းစီးတောင် ဖြစ်နေနိုင်လို့ပါ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူအားလုံးက သေသေချာချာ အကျိုးအပြစ် စီစစ်နားလည်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ယနေ့အထိ ကျွန်တော်လေ့လာနားလည် ထားသလောက်ကတော့ ဖက်ဒရယ်စံနစ်ရဲ့ အနှစ်သာရက ဒေသအလိုက် မတူညီတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု့တွေကို ဗဟို စုစည်းမှု့တခု(နိုင်ငံ) အောက်မှာ အချိုးတကျ ခွဲဝေထားရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်အကြောင်း တယောက်ယောက်က ပိုစ့်တင်လာရင် ၀င်ဆွေးနွေးပါမယ်။
အခုဒီမှာပြောချင်တာကတော့ ဖက်ဒရယ်စံနစ်ကို ကျင့်သုံးရာမှာ ဒေသ(regin)အလိုက်ကွဲပြားတဲ့ ဒေသအခြေပြု အစုအဖွဲ့များကို စုစည်းထားတဲ့နိုင်ငံမျိုးနဲ့ လူမျိုး(race)အလိုက်ကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးအခြေပြု အစုအဖွဲ့များကို စုစည်းထားတဲ့ နိုင်ငံမျိုး မတူနိုင်လောက်ပါဘူး။ ပေးထားချက်မတူတဲ့အတွက် တွက်နည်းလဲမတူလောက်ပါဘူး။ အဖြေလဲမတူလောက်ပါဘူး။
ဒါ ထားပါတော့ – ဒီဥစ္စာက အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ဆွဲစိ ထားဘို့ နည်းလမ်းတမျိုးလို့ နားလည်ကြည့်မိတယ်။
အဲဒီအစား ဖြေချလိုက်ရင်ရော ??
လူမျိုးစွဲ ၊ ဒေသစွဲ ၊ ဘာသာစွဲ တွေအစား
နောင်အနာဂတ်မှာလဲ လူမျိုးတွေက ရောကုန်မှာလို့ပဲ ထင်မိလို့ပါ။
ရောပစေပေါ့ အကုန် လူတွေပဲမဟုတ်လား ??
အစထောင်တဲ့အလုပ်ကို ခဏရပ်ပြီး ပိုစ့်ကိုပြန်လှည့်ရရင် –
ဒီစစ်တပ်၊ ဒီလွှတ်တော်၊ ဒီအခြေခံဥပဒေ တွေနဲ့တော့ ဘယ်လို အပြီးသတ်အဖြေမှ မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ခပ်မြန်မြန်ဖြစ်စေ တဖြေးဖြေးဖြစ်စေ ၊ အလွန့်အလွန်ဖြေးလေးတဲ့ ဘုရားစူးတဖြေးဖြေးနဲ့ပဲ ဖြစ်စေ ပေါ့ …
ဘယ်သူကမှလာပြောင်းမပေးရင် – ကျွန်တော်တို့ဘာသာပဲ ပြောင်းဘို့ ကြိုးစားကြရပါမယ်။
ဒီထဲမှာ သိတဲ့သူတွေ ၀င်ရေးတာဟာလဲ ပြောင်းဘို့ ကြိုးစားတာ တမျိုးပါပဲ။